Hosodoko an-drindrina goavambe nahatonga ilay fokontany meksikana ho ‘Majika’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2015 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, বাংলা, မြန်မာ, Nederlands, русский, Magyar, Français, Ελληνικά, Deutsch, Català, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Español
“Hosodoko goavan'ny” Las Palmitas eo amin'ny dingana farany. Sary nalaina nahazoana alalana avy amin'ny pejy Facebook fiaraha-mientan'ny Germen Crew.
Ao afovoan'ny zanabohitra kely manodidina ny tanànan'i Pachuca, Hidalgo, no notokanana tamin'ny volana jolay teo ny graffiti an-drindrina lehibe indrindra ao Meksika, nolokoina tamin'ny trano 200. Saingy nahavita zavatra nihoatra noho ny fanomezana loko marevaka amin'io distrika ankavoanan'i Las Palmitas, izay maro an'isa manodidina azy ny tantsaha ary avoavo ny tahan'ny fahantrana sy ny famonoan'olona ilay “hosodoko an-drindrina goavana”.
Niteraka famoronan'asa, nampihena ny herisetran'ny tanora ary nampiditra ny fisainam-pahaiza-miaramonina, nahatonga an'i Las Palmitas ho ilay lazain'ireo mpitarika ny tetikasa ho “fiarahamonina majika voalohany” — kilalaonteny avy amin'ny fandraisana an-tanan'ny governemanta meksikana hampiroborobo ny “tanàna majika” (Pueblos Mágicos) ho toerana fizahantany — ny ezaka nataon'ireo mpiara-mientana ireo.
Nitarika ny tetikasa ny fiaraha-mientana mahaleotena meksikana antsoina hoe Germen Crew (Ekipa Tsiry), ivondronan'ireo artista an-tanandehibe spesialista amin'ny fanaovana zavakanto graffiti, fandokoana an-tanandehibe ary amin'ny fandraketana votoaty amin'ny haino aman-jery. Vondrona iray izay te-hanome endrika sy dika vaovao ireo toeram-bahoaka sy hamerina amin'ny laoniny ny lasitra ara-piarahamonina ho amin'ny tombontsoana iombonana. Mivaky toy izao ny ao amin'ny pejy Facebook-ndry zareo:
Fanomezana ara-javakanto ho an'ny tanànanay ny asa vitanay. Amin'ny alalan'ny loko, endrika sy vohitra ary fangarom-pampitam-baovao ny izarànay ny fanaovanay sy ny fahatakaranay ny zavakanto. Tianay hibosaka amin'ny alalan'ny fampaherezana sy ny fientanentanam-pon'ny miaina ao amin'ny faritra onenanay ny voan'ny fahafaha-manao zavatra. Tianay ny isian'ny fanaovan-java-baovao amin'ny seha-bahoaka, mba hahatonga azy ireny ho betsaka kokoa ny zavatra azon'ny mponina atao eo aminy, toerana maro manabe, mandrisika, ary manampy amin'ny fampitsimohana sy fanohanana ny fifandraisana vaovao eo amin'ny olona manodidina sy ireo fomba fiteny mirona mankany.
Ankoatra ny fiaraha-miasa eo amin'ny fitantanam-panjakana federaly sy ny fiadidian'ny tanàna ao an-toerana, izay nampanao izay hahamora azo ny fitaovana nilaina, dia ny fandraisana anjara mavitriky ny fianakaviana 452 monina ao Las Palmitas (manana mponina 1.808 eo ho eo) no tena nahafahana nanodina azy. Nakana ny heviny hatrany ireo mponina nandritra ny telo volana nanatontosana ny tetikasa, ary nandray anjara tamin'ireo hetsika ara-kolontsaina isankarazany notontosaina nandritra izany fotoana izany ihany koa ry zareo: atrikasa, valan-dresaka sy zahantany izay miompana amin'ny fampihenana ny ditran-jatovo no tanjon'izany rehetra izany.
‘Manjaka ny firindrana sy ny fiaraha-miaina’
Amin'ny lahatsary eto ambony mandrakitra ny atrikasa miompana amin'ny arendrina asavoana, dia nanamarika ny mponin'i Las Palmitas fa nisy fiantraikany mahafinaritra teo amin'ny manodidina ireo asa ara-javakanto natao :
Ho anay dia andro fety izao eto amin'ny distrikanay, satria miaina zavatra tsy mbola nitranga taminay hatrizay niainanay izahay amin'izao fotoana izao.
Mahita firindrana sy fiaraha-miaina ambonin'ny zava-drehetra aho ao amin'ny fianakavianay tsirairay avy. Mino aho fa noho ireo hetsika maroireo dia hihatsara ny fiarahamoninay ary tsy mieritreritra aho hoe mbola ho betsaka ny ditra.
Raha hijery ny lahatsary misy dikantsoratra amin'ny teny anglisy dia tsindrio eto.
Nandritra ny antsafa nifanaovana tamin'ny gazetiboky Planisferio, nanazava ny Germen Crew fa ny mahatonga ny zavatra ataony ho mamoaka zava-baovao dia ny fifantohan-dry zareo amin'ny fandokoana ireo toerana tsy an'ny rafi-pitantanam-panjakana, fa amin'ny toeram-bahoaka, tsena, eny fa na dia amin'ireo toerana natao anjorom-bala manana taha avo amin'ny fisian'ny heloka bevava aza. Mandritra izany fotoana izany dia lazain-dry zareo fa ny fahombiazan-dry zareo dia vokatry ny fiezahana niarahana sy ny havitriky ny vondrona.
‘Faribohitra voalohany mampitolagaga ao Meksika’
Nanokatra lahatsary fohy dia fohy mandrakitra ny fiovan'i Las Palmitas ho lasa fiarahamonina velona sy marevaka ny fanambaràna “Mampitolagaga ny loko”. Raha hijery ny lahatsary misy dikantsoratra amin'ny teny anglisy dia tsindrio eto.
Efa za-draharaha 13 taona niasana ny Crew ary nanatontosa tetikasa tao amin'ny Tsena Jamaikana ao Mexico City; tao amin'ny tanimalalaky ny tanàna vaovao ao Ecatepec ao Meksika; ary ny tao Miravalle, Guadalajara, ankoatra ny hafa tsy voatanisa. Ankehitriny ry zareo nahatratra ny tanjony nanova an'i Las Palmitas ho amin'ilay antsoin-dry zazeo ho “faribohitra mampitolagaga voalohany ao Meksika,” ary azo lazaina fa mbola ho avy ny manetsabe.
Ahitanao fanampim-baovao ny asan'ny Germen Crew ao amin'ny pejy Facebook sy Instagram, ary ao amin'ny fantsona YouTube.